बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाईमा रविन्द्र मिश्रको रोइलो – Nepal News
बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाईमा रविन्द्र मिश्रको रोइलो
तत्कालिन माओवादी जनयुद्दका क्रममा भएको एउटा हत्याकाण्डमा आरोपित बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले जेलमुक्त गर्ने घोषणा गरेपछि रविन्द्र मिश्रको रोइलो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चामा देखियो ।
यी तिनै रविन्द्र हुन, जसले केही समयअघि साझा पार्टी गठन गरेका थिए र, पछि विवेकशील पार्टीसँग एकता गरेका थिए ।
रविन्द्र मिश्रले द्वन्द्वकालका मुद्दाको दुहाई दिएर पीडित पक्षका लागि खतरनाक भनिएका ढुंगेललाई रिहाईको ठाडो बिरोध गरेका छन् ।
यी तिनै रविन्द्र मिश्र हुन, जो नेपालमा गणतन्त्रको लडाई चलिरहँदा बेलायतमा बसेर राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा वकालत गर्दै थिए ।
यी तिनै रविन्द्र मिश्र हुन, जसले गणतन्त्रको स्थापनाका लागि हजारौं शहीदहरुको बलिदान भइरहेको बेला, माओवादीका योद्दाहरु भोक प्यास नभनी संघर्षमा होमिएका बेला माओवादीविरुद्ध विषबमन गर्दै थिए ।
यि तिनै रविन्द्र मिश्र हुन, जो विविसीबाट निकालिएपछि एउटा महत्वाकांक्षा बोकेर राजनीतिमा होमिए ।
र, यी तिनै रविन्द्र मिश्र हुन, जसले बारम्बार माओवादी आन्दोलन, यसको नेतृत्व र यसको स्पिरिटका विरुद्ध बोल्दै आए ।
अहिले यिनै तथाकथित पत्रकार रविन्द्र मिश्र बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध चर्को कुरा गर्दै छन् ।
आखिर रविन्द्रलाई बालकृष्णको मात्रै किन चिन्ता भयो ?
यिनलाई देशमा भइरहेको अन्य समस्यामा किन चिन्ता भएन ?
कैलालीमा बोक्सीको आरोपमा महिला कुटिँदा कहाँ गए यी रविन्द्र मिश्र ?
देशमा भ्रष्टाचारीहरु खुला उन्मुक्ति हुँदा कहाँ हराए यी रविन्द्र मिश्र ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा सरकारको लम्पसार पर्यो मोदी सामु, कहाँ थिए यी रविन्द्र मिश्र ?
भारतीय सेनाले नेपाली सीमा मिचेर नेपालीमाथि बन्दूक तेस्र्यारहँदा कहाँ थिए यी रविन्द्र मिश्र
स्पष्ट छ, रविन्द्र मिश्रको मिसन नै माओवादी सकाउनु थियो । उनी यसका लागि नै परिचालित थिए । हिजो युद्दकालमा उनले मालिकको इसारामा जे गर्न सकिन्थ्यो त्यति गरे । तर उनको बिरोधले माओवादी आन्दोलन पतन भएन । यो वा त्यो रुपमा गल्छी गल्छौंडा पार गर्दै गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो । रविन्द्रहरुले त माओवादी आन्दोलन ध्वस्त होस र प्रचण्ड लगायतको नेतृत्व चिसो छिंडीमा हत्कडी लगाएर बसोस भन्ने चाहेका होलान तर उनले सोचेजस्तो भएन ?
बरु ठीक उल्टो प्रचण्ड नै पछिल्लो दुई दशकको निर्णायक राजनीतिज्ञ बने ।
युद्दकालपछि पनि रविन्द्रहरुको मुख्य ध्यान र कोशिस द्वन्द्वकालका मुद्दाका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा नेपालका माओवादी नेताहरुलाई तान्ने रह्यो । कैयन गैरसरकारी संस्थाहरुले यसको प्रयास पनि गरे । तर यो सम्भव भएन । अहिले रविन्द्रको अभिव्यक्तिको तुष पनि यो भन्दा फरक छैन ।
रविन्द्र मिश्र जी, हेक्का रहोस्, अहिले रविन्द्र मिश्र एकजना मात्रै जेलबाट रिहा हुन गइरहेका होइनन् । त्यहाँ अन्य कैयन कैदीहरु पनि रिहा भएका छन् । के तपाईले ती सबै कैदीहरुको जानकारी लिनु भएको छ ? कुन कुन कसूरमा के कस्तो सजाय भोगिरहेका कैदीहरु रहेछन् भनेर हेर्नु भएको छ ? के बालकृष्ण ढुंगेल मात्रै रिहा भएपछि पिडितका लागि खतरा हुने व्यक्ति हुन ? त्यसो हुन्थ्यो भने त हिजो माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई पनि राजाले जेलमा कोचेको थियो, के तिनीहरुलाई रिहा नगरी अहिलेसम्म जेलमै कोचेर राखेको भए तपाईले गणतन्त्र नेपालमा पार्टी खोल्न सक्नुहुन्थ्यो ।
वाहियात तर्क नगर्नुस् । कुतर्कले राजनीति जोगिन्न ।
एउटा तपाईले र अरुले पनि मान्न नचाहेर पनि मान्नै पर्ने कुरा के हो भने नेपालमा माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्व नगरेको भए न आज तपाई यसरी पार्टी खोल्ने स्थितिमा पुग्नुहुथ्यो, न हामी गणतन्त्र मनाइरहेका हुन्थ्यौं ।
ट्याग्स: balkrishna dhungel